Go?aamadii guddiga talo-bixinta ee wada hadallada waftiga dawlada Somaliya & Puntland oo dib u dhacay. [Akhris …] – Radio Daljir
Go?aamadii guddiga talo-bixinta ee wada hadallada waftiga dawlada Somaliya & Puntland oo dib u dhacay. [Akhris …]
Galkacyo, Aug 19 – Waxaa xoogaa dib u dhac ahi ku yimid go?aamo laga dhawrayey guddi saddex waji ah oo loo xulay in ay ka soo talo-bixiyaan qodabadii saldhigga u ahaa wada hadalladii dhax maray dawladda Puntland iyo waftigii ka socday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayey R/wasaare Sharmaarke.
Guddigaan oo kulamo gaani-gooni ah yeelanayey illaa xalay fiidkii hore, ayaa la filayey maanta in ay ka soo baaraan degaan dhammaan arrimihii loo xilsaaray ee ku saabsanaa mowduucyadii ay ka wada hadleen labada dhinac ee Puntland iyo dawladda Soomaaliya, laakiin walib ma suurtoobin guddiyadaasi in ay ka fara xashaxaan arrimihii ay ku howlanaayeen.
Wasiiru dawladaha madaxtooyada iyo arrimaha dawlada wanaagga Maxamed faarax Ciise ?Gaashaan? oo caawa la hadlay idaacadda Daljir ayaa sheegay in ay wali socdaan kulamadii gooni-goonida ahaa ee ay yeelanayeen saddexda guddi farsamo ee shalay loo saaray ka talo bixinta waxyaabihii labada dawladood isla soo qaadeen.
Md. Gaashaan, waxaa uu tilmaamay in ay suurto gal tahay illaa caawa in ay socdaan kulamada guddiyadu ay yeelanayaan, wixii ka danbeeyana ay soo gudbiyaan talo bixintooda si markaasi kadibna loo soo saaro go?aamadii la isku afgartay.
Maalinimada berri ah ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo dhammaan qodobadii ay isla meeldhigeen labada dhinac ee Puntland iyo dawladda Soomaaliya, waxaana in badan oo ka mid ah bulashada Soomaaliyeed si weyn u dhowrayaan qodobada rugniga u noqon doona wada hadallada dhawrka maalmood qaatay ee dhaxmaray labada dawladood.